Holocene: njirimara, ihu igwe, geology, flora na fauna | Network Meteorology
El Ogechi Ọ bụ ọgbọ na-ekewa abụọ n'oge a maara dị ka Pleistocene y Holocene. Holocene bụ oge ikpeazụ amara ama oge ebe ọ bụ na ụwa anyị nọ ugbu a. Ọ malitere ihe dịka afọ 12.000 gara aga, kpọmkwem 10.000 BC ma anyị ka nọ na Holocene taa. Oge a na-ekpuchi ọtụtụ mmepe nke mmadụ ọbụna kemgbe ọdịdị nke Ndị ọzọ na teknụzụ ndị anyị nwere taa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oge Holocene.
1 General njirimara
2 Gelocene Geology
3 Igwe ihu igwe Holocene
N’oge a, ụwa agbanweela nke ukwuu. Imirikiti mgbanwe ndị a hụrụ bụ na ụdị dị iche iche nke anụ ọhịa ebe ọ bụ na omume nke ugbu a nwoke na ọtụtụ puku umu nke osisi na ụmụ anụmanụ na-akpata ikpochapu. Mmadu aburula onye ndu kachasi elu na uwa a n’agbanyeghi ibibi otutu ihe.
Holocene agafeela ihe karịrị afọ 12.000 n'ihe dịka ma ọ bụ nke gụnyere mmepe dum nke mmadụ. N'oge a, ntọala nke ndị otu mmekọrịta mmadụ na mbụ na mmepeanya ụmụ mmadụ na mmepe nke ederede, njem nyocha na nnukwu ọdịbendị, ọgụgụ isi na teknụzụ, n'etiti ndị ọzọ, nwere ike kpuchie.
N'oge a enwere oke mkpochapu nke umu nke elere anya site na usoro na-aga n'ihu ma na-adịgide adịgide. Speciesdị nke a nke anụmanụ na osisi belatara n'ọtụtụ ọnụọgụ n'ihi omume mmadụ. Edebere usoro a dum site na ndị ọkachamara dịka otu n'ime usoro mkpochapụ kachasị njọ nke meworo na ụwa anyị. Nke a bụ n'ihi na ihe kpatara mbibi a abụghị n'ihi ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi kama ọ bụ n'ihi otu ụdị na-ebi na mbara ala ma bụrụ nke kachasị.
N'oge Holocene a na-ahụta na enwere oge mmekọrịta oge. Nke ahụ bụ, oge mgbe ikuku jụrụ oyi na-akwụsị ma nwee obere mpaghara juputara na ice. A na-atụ anya na ọ bụghị n’oge dị anya ka glaciation ọzọ ga-ewere ebe ọ bụ na, site na ọmụmụ anyị nwere na ihe ọmụma site na ndekọ fosil, oge ọhụụ ọzọ ga-amalite n’oge adịghị anya ma ọ bụ kwesịrị ịmalite.
Banyere geology, ọ bụ oge ọ na-adịchaghị mkpa kemgbe ahụ enwebeghị mgbanwe dị ukwuu na mmegharị ororogen, ma nhazi nke kọntinent. Somefọdụ iberibe akwụkwọ ụfọdụ ndị dị na kọntinent a maara dị ka Pangea anọgidewo na-aga ma jiri nwayọọ karịa otú ọ dị n'oge ochie. Ogologo nke kpuchiri kọntinent site na mmalite oge a ruo ugbu a bụ naanị otu kilomita. Agbanyeghị, ekwesịrị ịdeba ama na ndị nọ na kọntinent a agaghị akwụsị ịkwaga ma a ga-atụ anya na n'ime nde afọ ole na ole, ha ga-agbakọ ọzọ ma mepụta mba ọzọ.
N'oge a, ịrị elu nke oke osimiri arịgoro n'ihi mgbaze ma ọ bụ glaciers. Ọtụtụ ala ndị mmiri mikpuru n'okpuru mmiri bụbu okporo ụzọ ndị jikọtara mpaghara ụfọdụ. N'echiche a, enwere ike ịsị na emebeghị thawing ahụ mgbe ọ gachara nwayọ nwayọ mana enwere oge nke gbazee rutere ụfọdụ elu na-eme ka oke osimiri dị elu na mberede.
N'iburu n'uche data ndị a, enwere ike ikwubi na oke osimiri rịrị elu nke 35 mita kemgbe Holocene malitere. Otu eziokwu na-echegbu onwe ya bụ na n'ime afọ 25 gara aga, oke osimiri arịwanye elu ọzọ na ọnụego ihe dịka 3mm kwa afọ, nke a na-agbanyekwu ọsọ maka etu ọnụego nkịtị dị. Nke a bụ n'ihi mmụba nke griin haus nke na-akpata mmụba na okpomoku zuru ụwa ọnụ na ihe kpatara ụfọdụ gas ndị nwere ike ijigide okpomọkụ.
Igwe ihu igwe Holocene
Ọnọdụ okpomọkụ n’oge a dị nnọọ nro karịa oge ndị gara aga. Nke a bụ maka na ọ bụ ọgbọ agbụrụ. Ogologo okpomọkụ bụ mmụba ma ọ bụ n'etiti 4 na 9 ogo ihe dị ka. Okpomoku nke uwa abughi otu, ebe obu na mpaghara ufodu o riri elu karie ma ebe ndi ozo wedara otu. Ala ndị meworo ka jụrụ oyi karịa bụ ndị dị na ndịda ndịda.
Na mpaghara ndị ọzọ ebe ha nwere ihu igwe ọzara, ọchịchị mmiri ozuzo malitere ịbawanye.
Mmepe nke ndụ n’oge oge Holocene enyebeghị mgbanwe karịrị akarị site n’echiche evolushọn. Omume kachasị akara nke enwere ike ịnọchite anya n'ime afọ ndị a bụ na ụdị amalitela ịla n'iyi karịa ọsọ ọsọ. Ọtụtụ na-ekwu na mbelata nke ụdị ihe a na ọdịdị mmadụ. Mkpochapu na-aga n'ihu ruo oge ugbu a mgbe enwere ọnụọgụ dị ukwuu nke ụdị ihe egwu.
Osisi nwere oke nkesa na ọkwa ụwa bụ angiosperms. Mpaghara nke ebe okpomọkụ kacha dịrị nso na Ecuador bụ ebe enwere oke mmiri mmiri nwere ọtụtụ ahịhịa na ọtụtụ ihe dị iche iche dị ndụ. Na ebe kacha nso okporo osisi na ahịhịa na-agbanwe n'ụzọ dị egwu. Akwukwo akwukwo na iru mmiri nke oke ohia na-enye ndi ozo osisi ndi ozo a na-emeghari ka ha di ala.
Banyere ụmụ anụmanụ, ụmụ anụmanụ dịgasị iche iche n'oge Holocene. Speciesdị ndị jisiri ike na-elekọta onwe ha n'oge a niile enwebeghị mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ evolushọn ọ bụla. Ihe e mesiri ike ma mee ogologo oge ka e kpochapụrụ ma anụmanụ ndị dị n'ụwa ma nke mmiri. Ihe a nile kpatara site n’omume ndi mmadu na ochicho ha imeri uwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Holocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Holocene